MyanmarCarsDB ကို iOS ဖြင့်အသုံးပြုနေသော User များအတွက် | CarsDB
MyanmarCarsDB ကို iOS ဖြင့်အသုံးပြုနေသော User...
MyanmarCarsDB ကို iOS ဖြင့်အသုံးပြုနေသော User များအတွက်
MyanmarCarsDB ကို iPhone (သို့) iPad အစရှိသော iOS အသုံးပြု Devices များဖြင့် အသုံးပြုသူ User များအနေဖြင့် A Problem Occurred with this Webpage so it was Reloaded ဟု ဖော်ပြထားသော Error များ ကြုံတွေ့ရကြောင်း ပြောပြမှုများ ရှိလာပါသည်.။ အဆိုပါ Error သည် iOS သုံး Devices အားလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘဲ အချို့ Device များတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလဲ သိရပါသည်.။ အထက်ပါ Error ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ iOS ကိုယ်တိုင်၏ Network Issues ကြောင့်ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်.။ MyanmarCarsDB.com ကဲ့သို့ အခြားသော Data များပြားသည့် Website များကြည့်ရှုရာတွင်လဲ ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရပါသည်.။ အထက်ပါ Error ဖြစ်ပေါ်ပါက အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှ နည်းလမ်း (၁) မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်းကြည့်နိုင်ပါသည်.။
နည်းလမ်း (၁) Resetting Network Setting.
ဖြစ်ပွားခြင်းအများစုမှာ Network Issues ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့် ပထမဆုံးနည်းလမ်းမှာ Network Setting ကို Reset ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်.။ ဖြေရှင်းရန်အတွက်
Settings ထဲမှ General ထဲမှ Reset Network Settings ကို နှိပ်ပါ.။ နှိပ်ပြီးပါက Wifi (သို့) Mobile Data ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး MyanmarCarsDB.com ကို ပြန်လည်အသုံးပြုကြည့်ပါ.။
အထက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်းမရပါက နည်းလမ်း (၂) ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ.။
နည်းလမ်း (၂) Browser Cache နှင့် History များရှင်းလင်းခြင်း
နည်းလမ်း (၁) ဖြင့်မရပါက Browser Setting များကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်.။
Safari Browser တွင် Settings ထဲမှ Safari ထဲမှ Clear Website Data ကိုနှိပ်ပါ.။ ထို့နောက် Safari ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ.။ MyanmarCarsDB.com ကို ပြန်လည်အသုံးပြုကြည့်ပါ.။
အထက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်းမရပါက နည်းလမ်း (၃) ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ.။
နည်းလမ်း (၃) iPhone (သို့) iPad ကို Restart ချခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အထက်ပါနည်းလမ်း (၂) ခုကြောင့် ဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း Device ကို Restart ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်.။
Home Button နှင့် Sleep Button (၂) ခုကို ဖိ၍ 15 စက္ကန့်ခန့်ကြာအောင် ဖိထားခြင်းဖြင့် Device ကို Restart ကျစေပါသည်.။ Device ပြန်ပွင့်လာပါက Browser အသုံးပြု၍ MyanmarCarsDB.com ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ.။
အထက်ပါ နည်းလမ်း (၃) ခုဖြင့် ဖြေရှင်း၍မရပါက နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ၏ အကူအညီရယူရန် လိုအပ်ပါသည်.။ ဤပြဿနာသည် Data အများအပြားပါဝင်သော Website များကို ကြည့်ရှုရာတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း Apple Forum တွင်လည်း ဆွေးနွေးထားသည်ကို အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.။
MyanmarCarsDB ကို iPhone (သို့) iPad အစရှိသော iOS အသုံးပွု Devices မြားဖွငျ့ အသုံးပွုသူ User မြားအနဖွေငျ့ A Problem Occurred with this Webpage so it was Reloaded ဟု ဖျောပွထားသော Error မြား ကွုံတှရေ့ကွောငျး ပွောပွမှုမြား ရှိလာပါသညျ.။ အဆိုပါ Error သညျ iOS သုံး Devices အားလုံးတှငျ ဖွဈပျေါခွငျးမရှိဘဲ အခြို့ Device မြားတှငျသာ ဖွဈပျေါကွောငျးလဲ သိရပါသညျ.။ အထကျပါ Error ဖွဈပှားရခွငျးမှာ iOS ကိုယျတိုငျ၏ Network Issues ကွောငျ့ဖွဈပှားရခွငျး ဖွဈပါသညျ.။ MyanmarCarsDB.com ကဲ့သို့ အခွားသော Data မြားပွားသညျ့ Website မြားကွညျ့ရှုရာတှငျလဲ ဖွဈပှားကွောငျး သိရပါသညျ.။ အထကျပါ Error ဖွဈပျေါပါက အောကျပါနညျးလမျးမြားထဲမှ နညျးလမျး (၁) မြိုးမြိုးကို အသုံးပွု၍ ဖွရှေငျးကွညျ့နိုငျပါသညျ.။
နညျးလမျး (၁) Resetting Network Setting.
ဖွဈပှားခွငျးအမြားစုမှာ Network Issues ကွောငျ့ဖွဈသောကွောငျ့ ပထမဆုံးနညျးလမျးမှာ Network Setting ကို Reset ပွုလုပျခွငျးဖွဈပါသညျ.။ ဖွရှေငျးရနျအတှကျ
Settings ထဲမှ General ထဲမှ Reset Network Settings ကို နှိပျပါ.။ နှိပျပွီးပါက Wifi (သို့) Mobile Data ကို ပွနျဖှငျ့ပွီး MyanmarCarsDB.com ကို ပွနျလညျအသုံးပွုကွညျ့ပါ.။
အထကျပါ နညျးလမျးအတိုငျးမရပါက နညျးလမျး (၂) ကို စမျးသပျကွညျ့ပါ.။
နညျးလမျး (၂) Browser Cache နှငျ့ History မြားရှငျးလငျးခွငျး
နညျးလမျး (၁) ဖွငျ့မရပါက Browser Setting မြားကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါသညျ.။
Safari Browser တှငျ Settings ထဲမှ Safari ထဲမှ Clear Website Data ကိုနှိပျပါ.။ ထို့နောကျ Safari ကို ပိတျပွီး ပွနျဖှငျ့ကွညျ့ပါ.။ MyanmarCarsDB.com ကို ပွနျလညျအသုံးပွုကွညျ့ပါ.။
အထကျပါ နညျးလမျးအတိုငျးမရပါက နညျးလမျး (၃) ကို စမျးသပျကွညျ့ပါ.။
နညျးလမျး (၃) iPhone (သို့) iPad ကို Restart ခခြွငျး
တဈခါတဈရံတှငျ အထကျပါနညျးလမျး (၂) ခုကွောငျ့ ဖွရှေငျးနိုငျသျောလညျး Device ကို Restart ပွုလုပျပေးဖို့ လိုအပျပါသညျ.။
Home Button နှငျ့ Sleep Button (၂) ခုကို ဖိ၍ 15 စက်ကနျ့ခနျ့ကွာအောငျ ဖိထားခွငျးဖွငျ့ Device ကို Restart ကစြပေါသညျ.။ Device ပွနျပှငျ့လာပါက Browser အသုံးပွု၍ MyanmarCarsDB.com ကို ပွနျလညျဝငျရောကျကွညျ့ပါ.။
အထကျပါ နညျးလမျး (၃) ခုဖွငျ့ ဖွရှေငျး၍မရပါက နားလညျတတျကြှမျးသူမြား၏ အကူအညီရယူရနျ လိုအပျပါသညျ.။ ဤပွဿနာသညျ Data အမြားအပွားပါဝငျသော Website မြားကို ကွညျ့ရှုရာတှငျ ဖွဈပျေါတတျကွောငျး Apple Forum တှငျလညျး ဆှေးနှေးထားသညျကို အောကျပါ Link တှငျ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ.။
Posted at: 15-06-2015 08:56 AM